दोस्रो नेपाल आइडल बिक्रम बन्ने सम्भावना कति ? – Everest Dainik – News from Nepal
काठमाडौं, मंसिर १७ । जारी नेपाल आइडल सिजन-२ मा अब पाँच प्रतिस्पर्धी मात्र बाँकी छन् । यसको अर्थ नेपाल आइडलको शिखर पुग्न धेरै समय छैन भन्ने जनाउ दिन्छ ।
पाँच प्रतिस्पर्धी उत्कृष्ट छन् । उनीहरुका प्रस्तुतीले स्रोतादर्शकको मन जितेको छ । प्रतिस्पर्धीले स्रोता-दर्शकको मन त जितेकै छन्, अब आइडलको उपाधि चाहिँ कसले जित्ला ? यो पश्न व्यापक उब्जिएको छ । धेरैको अनुमान छ बिक्रम बरालले नै आइडलको उपाधि जित्न सक्छ ।
किन बिक्रम सबैको रोजाइँमा ? यो पश्नको सरल जवाफ छ उनी जस्तो गीतलाई पनि न्यायपूर्वक गाउन सक्छन् । तर, उनी नै आइडलको उपाधि जित्छन् भनेर दाबी भने गर्न निकै मुस्किल छ । किनभने, यो भोटिङको चरण हो ।
अब जो प्रतिस्पर्धीले सर्वाधिक भोट पाए उसले नै आएडलको उपाधि हात पार्ने छ । बिक्रममा आइडल हात पार्न सक्ने क्षमता छ । यो कुरा बारम्बार भनि राख्नु पर्दैन । निर्णायक, समर्थकले बुझि सकेका छन् बिक्रममा कति क्षमता छ भनेर ।
अब क्षमतासँगै भोट पनि आवश्यक पर्ने भएकाले बिक्रमको यात्रा स्रोतादर्शकको हातमा छ । उनले अहिलेसम्म एक पटक सर्वाधिक भोट, दुई पटक पफर अफ दि डे पाएका छन् । र, बिक्रम तीन पटक बटम थ्रीमा परेका छन् ।
भोट पाए उनको यात्रा अगाडि बढ्छ नपाए रोकिन्छ । यसकारण बिक्रको यात्रा अगाडि बढ्न अत्यधिक भोटको पाउनको अर्को विकल्प छैन । अहिलेसम्म उनले स्रोतादर्शकको अत्यधिक भोट पाइरहेका छन् । बिक्रम आइडलको ‘गोल्डेन माइक’ विजेता पनि हुन् । बिक्रमले अहिलेसम्म दमदार प्रस्तुति दिदैं आएका छन् । हेरौं उनको आगामी यात्रा कस्तो हुन्छ ।